Apple ayaa soo bandhigeysa iPhone 11 cusub oo leh naqshad cusub iyo 6 midab oo la heli karo | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | | iPhone 11, Noticias
IPhone 11 wuxuu fure u ahaa muhiimada maanta waxaana ugu dambeyntii ogaaneynaa macluumaadka ugu haboon ee ku saabsan terminalkan cusub. Waxay leedahay naqshad ku saleysan aluminium iyo muraayad isbedelka ugu weyna waa kan naqshadeynta kamaradda gadaal. Intaa waxaa dheer, waa la suuq geeyn doonaa lix midab kala duwan oo ka mid ah taas oo ah Wax soo saarka (RED). IPhone 11 wuxuu leeyahay isbeddelo waawayn oo ku saabsan qeexitaanka iyo sidoo kale isdhexgalka muraayada cusub ee Kaameeraha Ballaadhan iyo xagal ballaadhan, kuwaas oo natiijooyinkoodu runtii yihiin kuwo la yaab leh sida ay ku muujiyeen soo bandhigidda.
Faahfaahinta iPhone 11 ayaa ugu dambeyntii la yaqaan
ka kaamirooyinka hore iyo gadaalba waa la badalay. Isku-darka kamaradda labaad waxay u oggolaaneysaa xulashooyinka waaweyn sida qaabka sawirku wuxuu u shaqeeyaa si siman, duubista waxyaabaha ku jira 4K ee 60 fps. Ficil ayaa sidoo kale lagu soo daray si loo awoodo in si dhaqso leh looga duubo barnaamijka Camera-ka laftiisa adoo riixaya badhanka muuqaalka qabashada dhowr ilbiriqsi. Dhismaha kamaradda TrueDepth hore waxay u oggolaaneysaa duubista taxanaha si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah, wax aan illaa iyo hadda qaban karin oo ay soo waceen Isbaanishyada
IPhone 11 ayaa leh jajab A13 Bionic ka yimid Apple. Jilib ay sheegtaan ayaa% ka dhaqso badan iPhone XR. Dhanka GPU-ga sidoo kale wuxuu hagaajiyaa waxqabadkiisa marka loo eego A12 Bionic. Waxay ku andacoodaan in qalabkan ay ku jiraan processor-ka ugu awooda badan iyo GPU-ga casriga ah. Isagoo tixraacaya baytariga, Apple waxay sheeganeysaa in batteriga iPhone 11 uu leeyahay hal saac ka dheer iPhone XR. Waxa kale oo ku jira iswaafajinta lacag-bixinta wireless, Wi-Fi 6, iyo 2 mitir oo caabbinta biyaha ah.
Qalabka wuxuu leeyahay a 6,1 inches waxayna leedahay tiknoolajiyadda Liquid Retina. Qiimaha IPhone-kan cusub wuxuu ka bilaabanayaa 699 Dollar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple waxay soo bandhigaysaa iPhone 11 cusub oo leh naqshad cusub iyo 6 midab oo la heli karo